Antenimierandoholona Hanaovana adihevitra lalina ireo didy hitsivolana
Rado Rafalimanana Ho atao lavanty ny fananany
Nilatsaka omaly ny fampahafantarana na « affichage » fa ho atao lavanty ny 28 mey izao manomboka amin’ny 9 ora maraina ny fananan’ilay mpandraharaha, Ny Rado Rafalimanana.
Paul Rabary « Tandindomin-doza ny firenena »
Fahiny talohan’ny nidiran’ny mpanjanaka teto Madagasikara dia ny mpanjaka no mpitazona sy tompon’ny Hasina, hoy ny mpahaifiarahamonina, Paul Rabary. Hasina izay azony avy amin’ny Zanahary sy ny Razana.
Voambolana “masoandro” Tena mahasarika ny fitondrana
Tanamasoandro, Kianjamasoandro, angovo azo avy amin’ny herin’ny masoandro sy ny hafa rehetra dia samy teny sy anarana nahenoana matetika ny voambolana hoe masoandro avokoa tao anatin’izao fitondrana izao.
Antoko HVM “Tsy ampy ny ezaka atao momba ny sosialim-bahoaka”
Manohana ny finiavan` ny Filoha Rajoelina amin` ny famerenana ny fiandrianam-pirenena Malagasy amin` ny fitakina ny Nosy Eparses ny antoko Hery Vaovaon` i Madagasikara.
Rodoben’ny mpanohitra “Ajanony io fanamboarana kianja ao Anatirova io"
Manota fady indray ny mpitondra, nosimbainy tanteraka ny toerana manan-kasina, mariky ny tantara etsy amin’ny rovan’i Manjakamiadana, hoy ny avy eo anivon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara na RMDM,
CENI Fantatra amin`ny 11 jona ny solon'i Thierry Rakotonarivo
Tafiditra ao anatin` ny lahadinikin` ny Antenimieram-pirenena amin` izao fivoriana ara-potoana izao ny fifidianana izay ho solon’ny toerana banga ao amin’ny
Fikitihana vakoka mampiady hevitra Nanamarin-tena ny fitondrana
Manoloana ny lahatsoratra nivoaka tao amin’ny Tribune de l’art izay maneho fa tandindomin-doza ny vakoka eto Antananarivo dia namoaka fanambarana manala izany ahiahy izany tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina ny fitondram-panjakana.
Efa tonga eny amin`ny Antenimierandoholona ireo didy hitsivolana taorian`ny nandanian`ny Antenimieram-pirenena izany.
Tsy hitovy ny fomba fiasan’ny roa tonta fa hanao adihevitra lalina ireo didy hitsivolana. Tsy nanisy adihevitra amin`ny vontoatiny ny depiote noho ireo hitsivolana efa nahazo ny fankatoavan`ny HCC ary efa navoaka rahateo ireo didy, araka ny lahatenin`ny filohany, Chrisitine Razanamahasoa, nandritra ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana ny 4 martsa lasa teo. Fomba arahina amin`ny fankatoavana no hataon`ny depiote amin`izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Tsiahivina fa iray andro no nandaniana lalàna sivy tao Tsimbazaza. Nanamafy ny filohan`ny sena Rivo Rakotovao fa manaja ny fenitra repoblikanina amin`ny fampandehanana anatiny ny asan`ny loholona . Misy, hoy izy, senatera sasany miteny fa dingan-dava fotsiny ny ao amin`ny sénat fa ny HVM no ao. Diso izany ka aleo aloha miala vao miteny fa hihomezan`ny olona fotsiny. Nambarany hatrany fa manahirana ny zava-misy ankehitriny mahakasika ireo hitsivolana satria misy natambatra. Ny hitsivolana and. Voalohany, ohatra, dia misy ny lalàna mifehy ny harena ankibon`ny tany sy ny tontolon`ny sarimihetsika kanefa zavatra tsy hifandraisany mihitsy. Mampametra-panontaniana ihany hoe hay ve nandray hitsivolana amin`ny lalàna mifehy ny harena ankibon`ny tany noraisin`ny filoham-pirenena ? Noho izany, tsy maintsy hirosoana ny fanadihadiana lalina, hoy hatrany ny fanazavana. Omaly moa ny fandinihana ireo lahadinika hodinihina sy holaniana amin’izao fivoriana tsy ara-potoana izao.